မန်စီးတီး သတင်းတိုများ - Sports Myanmar
1 week ago by YK
* မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ လက်ရှိ ရမှတ် 81 မှတ်ဟာ PL ချန်ပီယံ5ခုရဲ့ ရမှတ်ကို ကျော်လွန်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
1996-97: Man Utd, 75.
1997-98: Arsenal, 78.
1998-99: Man Utd, 79.
2000-01: Man Utd, 80.
2010-11: Man Utd, 80.
* ဂျီးဆပ် စတင်ပါဝင် ကစားခဲ့ကတည်းက မန်စီးတီးအသင်း ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ရှုံးပွဲမရှိတာ 31 ပွဲ ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ရှုံးပွဲမရှိ အများဆုံးစံချိန်နဲ့ စတင်ပွဲထွက် ကစားခဲ့ဖူးသူများ –
47 ပွဲ – လေးမန်း
37 – ဒရော့ဘာ
37 – ရော်ဘင်
31 – ဂျီးဆပ်
* ယူနိုက်တက်ကို အနိုင်ကစားပြီး PL ချန်ပီယံ သရဖူ ဆွတ်ခူးနိုင်ချေ ရှိနေမှုအပေါ် ကွန်ပနီရဲ့ မှတ်ချက်စကား
” မန်ချက်စတာမှာရှိနေတဲ့ အပြာရောင် ဘက်တော်သားတွေအတွက် တစ်သက်မှာ တစ်ခါသာ ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး မျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် အဲပွဲမတိုင်မီ ကစားဖို့ ကျန်နေတဲ့ 1 ပွဲကလဲ ကျနော်တို့အတွက် ခက်ခဲနေဦးမှာ သေချာပါတယ်”
* “ ကျနော့်ရဲ့ ပြင်ပ လူနေမှုဘ၀က အခက်အခဲတွေ အများကြီးနဲ့ ကြုံနေရပါတယ်၊ ကျနော့်သားက ဘ၀ရှင်သန် ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ တိုက်ခိုက်တွန်းလှန်နေရတာပါ”
* ဘောလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို အမြဲမပြတ် ထုတ်ပြန်ကြေငြာနေတဲ့ CIES ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့6လ အတွင်း ပြောင်းရွှေ့ကြေးတန်ဖိုး မြင့်တက်လာခဲ့တဲ့ ဥရောပ ထိပ်သီးလိဂ်5ခုက ကစားသမားစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီစာရင်းမှာတော့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး တန်ဖိုး အမြင့်တက်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားအဖြစ် လီဗာပူး တောင်ပံကစားသမား ဆာလတ်က ရပ်တည်နေခဲ့ပြီး၊ သူ့ရဲ့ နောက်မှာတော့ မန်စီးတီး ဂိုးသမား အီဒါဆင် နဲ့ ဆာနေးတို့က အသီးသီး ရပ်တည်လျှက် ရှိနေပါတယ်။
2. အမည် – အီဒါဆင် (မန်စီးတီး)
2017 ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ တန်ဖိုး – 24.3 သန်း
2018 ခုနှစ်၊ မတ်လ တန်ဖိုး – 98.7 သန်း
မြင့်တက်လာသော အပြောင်းအရွှေ့ တန်ဖိုး +74.4 သန်း
3. အမည် – ဆာနေး (မန်စီးတီး)
2017 ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ တန်ဖိုး – 88.2 သန်း
2018 ခုနှစ်၊ မတ်လ တန်ဖိုး – 151.2 သန်း
မြင့်တက်လာသော အပြောင်းအရွှေ့ တန်ဖိုး +63 သန်း
* “ အသင်းရဲ့ အနေအထားက အများကြီးကောင်းမွန်နေပါပြီ။ ကမ္ဘာ့ ၀င်ငွေအများဆုံး ကလပ်စာရင်းမှာလဲ ကျနော်တို့ဟာ ရီးရဲ၊ ဘာကာ၊ ယူနိုက်တက်တို့ရဲ့ နောက်မှာ ရပ်တည်နိုင်လာခဲ့ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ တိုးတက်လာမှုတွေဟာ အံ့မခန်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က ကျေနပ်ခြင်းတော့ မရှိသေးပါဘူး” #ဆိုရီယာနို
* မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ လကျရှိ ရမှတျ 81 မှတျဟာ PL ခနျြပီယံ5ခုရဲ့ ရမှတျကို ကြျောလှနျလာခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
* ဂြီးဆပျ စတငျပါဝငျ ကစားခဲ့ကတညျးက မနျစီးတီးအသငျး ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ရှုံးပှဲမရှိတာ 31 ပှဲ ရှိလာခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ရှုံးပှဲမရှိ အမြားဆုံးစံခြိနျနဲ့ စတငျပှဲထှကျ ကစားခဲ့ဖူးသူမြား –
47 ပှဲ – လေးမနျး
37 – ဒရော့ဘာ
37 – ရျောဘငျ
31 – ဂြီးဆပျ
* ယူနိုကျတကျကို အနိုငျကစားပွီး PL ခနျြပီယံ သရဖူ ဆှတျခူးနိုငျခြေ ရှိနမှေုအပျေါ ကှနျပနီရဲ့ မှတျခကျြစကား
” မနျခကျြစတာမှာရှိနတေဲ့ အပွာရောငျ ဘကျတျောသားတှအေတှကျ တဈသကျမှာ တဈခါသာ ရနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေး မြိုးပါ။ ဒါပမေယျ့ အဲပှဲမတိုငျမီ ကစားဖို့ ကနျြနတေဲ့ 1 ပှဲကလဲ ကနြျောတို့အတှကျ ခကျခဲနဦေးမှာ သခြောပါတယျ”
* “ ကနြေျာ့ရဲ့ ပွငျပ လူနမှေုဘဝက အခကျအခဲတှေ အမြားကွီးနဲ့ ကွုံနရေပါတယျ၊ ကနြေျာ့သားက ဘဝရှငျသနျ ရပျတညျဖို့ ခကျခကျခဲခဲနဲ့ တိုကျခိုကျတှနျးလှနျနရေတာပါ”
* ဘောလုံးနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို အမွဲမပွတျ ထုတျပွနျကွငွောနတေဲ့ CIES ကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့6လ အတှငျး ပွောငျးရှကွေ့ေးတနျဖိုး မွငျ့တကျလာခဲ့တဲ့ ဥရောပ ထိပျသီးလိဂျ5ခုက ကစားသမားစာရငျးကို ထုတျပွနျကွငွောလိုကျပါတယျ။ အဲဒီစာရငျးမှာတော့ ပွောငျးရှကွေ့ေး တနျဖိုး အမွငျ့တကျဆုံး ဖွဈခဲ့တဲ့ ကစားသမားအဖွဈ လီဗာပူး တောငျပံကစားသမား ဆာလတျက ရပျတညျနခေဲ့ပွီး၊ သူ့ရဲ့ နောကျမှာတော့ မနျစီးတီး ဂိုးသမား အီဒါဆငျ နဲ့ ဆာနေးတို့က အသီးသီး ရပျတညျလြှကျ ရှိနပေါတယျ။
2. အမညျ – အီဒါဆငျ (မနျစီးတီး)
2017 ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ တနျဖိုး – 24.3 သနျး
2018 ခုနှဈ၊ မတျလ တနျဖိုး – 98.7 သနျး
မွငျ့တကျလာသော အပွောငျးအရှေ့ တနျဖိုး +74.4 သနျး
3. အမညျ – ဆာနေး (မနျစီးတီး)
2017 ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ တနျဖိုး – 88.2 သနျး
2018 ခုနှဈ၊ မတျလ တနျဖိုး – 151.2 သနျး
မွငျ့တကျလာသော အပွောငျးအရှေ့ တနျဖိုး +63 သနျး
* “ အသငျးရဲ့ အနအေထားက အမြားကွီးကောငျးမှနျနပေါပွီ။ ကမ်ဘာ့ ၀ငျငှအေမြားဆုံး ကလပျစာရငျးမှာလဲ ကနြျောတို့ဟာ ရီးရဲ၊ ဘာကာ၊ ယူနိုကျတကျတို့ရဲ့ နောကျမှာ ရပျတညျနိုငျလာခဲ့ပါပွီ။ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈအနညျးငယျအတှငျးမှာ ကနြျောတို့ရဲ့ တိုးတကျလာမှုတှဟော အံ့မခနျးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့က ကနြေပျခွငျးတော့ မရှိသေးပါဘူး” #ဆိုရီယာနို
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်မှာ ကစားဖို့ ဆန်းချက် ငယ်စဉ် က အိပ်မက် ခဲ့ဖူးကြောင်း ချီလီ အသင်းဖော် ပြောကြား
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ၃ – ၀ စတုတ်စီးတီး (ဟိုက်လိုက် ဗီဒီယို)
မက်ဆီသာလျှင် သမိုင်းတစ်​​လျှောက်​အ​ကောင်းဆုံးကစားသမားပါဆိုတဲ့ အက်​စပန်​​ညောနည်းပြ ဆန်းချက်​ဖလိုရပ်​
စီရော်နယ်ဒို မက်ဆီ တို့ထက် လက်ရှိမှာ ပိုကောင်းတဲ့ ကစားသမားကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဘာလော့တယ်လီ
FA Cup ကို ယှဉ်လုကြမယ့် နည်းပြ တွေ အနက် မော်ရင်ဟို ဟာ ဖိအား အများဆုံး ဖြစ်တယ် လို့ ဂျေမီရက်နက် ပြောဆို
အားကစားချစ်သူတိုရဲ့ အကောင်းဆုံးအဖော်မွန် Sports Myanmar
Phone: +959 9782 38 118
Contact Us: info@sportsmyanmar.com
Copyright ©2017, Sports Myanmar. All Rights Reserved. Site byNewmen